IVisa yaseZambia | IVisa eya eZambia | natvisa.com
Isicelo seZambia kwi-Intanethi
Icandelo loMphathiswa Wezemicimbi Yasekhaya (Isebe Lezokufuduka) kwiRiphabhlikhi yaseZambia lazise ngenkqubo entsha nelula yokufumana i-visa yeZambia. Le yinkqubo ekwi-Intanethi apho abafaki-zicelo kufuneka benze yonke inkqubo yesicelo kwi-intanethi. Ixesha lokulungisa nalo lingaphantsi kakhulu kwaye ileta yokuvunywa kwe-eVisa ithunyelwe kubo nge-imeyile. Kanye ukusuka ekufakeni isicelo sokufumana i-visa, yonke into ngoku inokwenziwa kwi-Intanethi, eyenza kube lula ukuba abahambi bamazwe aliqela bafumane i-visa. Inkqubo ye-elektroniki yesicelo se-visa yenze ukuba kube lula kakhulu kubantu abaceba uhambo oluya eZambia.
Iindidi zeVisa yaseZambia
ITrans eTVisa Imeyli 90 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-7 multiple Faka isicelo ngoku
Abantu abahamba besuka kumazwe angaphandle kufuneka balayishe la maxwebhu alandelayo kunye nefom yesicelo se-visa -ifoto yomenzi-sicelo, ikopi ekhutshiweyo yephepha le-bio yepasipoti, ileta yokugubungela, isiqinisekiso senqwelomoya, ubungqina bendawo yokuhlala, ikopi efundwe wephepha lokugqibela lepaspoti (ukuba ikhona), kunye neleta yesimemo (ukuba ikhona).
Xa ufaka isicelo se-eVisa yakho, kufuneka wenze i-imeyile id. Oku kuya kukunceda kakhulu njengoko izaziso ze-eVisa yakho ziya kuthunyelwa apha. Emva kwexesha ileta yakho yokuvunywa kwe-eVisa nayo iya kuthunyelwa kule id ye-imeyile.
Elinye lawona maxwebhu abaluleke kakhulu ekufuneka ubenayo kwinkqubo yokufaka isicelo sepasipoti yipasipoti yakho esebenzayo, ekufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Amanqaku okungena kwisikhululo seenqwelomoya
Abasemagunyeni baseZambia babele izikhululo zeenqwelo moya ezithile zokungena kwabo baneeVisa:
Isikhululo senqwelomoya saseKenneth Kaunda, eLusaka
Isikhululo senqwelomoya saseHarry Mwanga Nkumbula, eLivingstone
sean Isikhululo senqwelomoya saseMansa Kapwepwe, eNdola
Ileta yaseVisa yokuVunywa kwe-eVisa
Ukufika kwabo eZambia, abahambi kufuneka bangenise ileta yokuvunywa kwe-eVisa kwabasemagunyeni. Iphepha-mvume lokugqibela liya kunikwa xa ufika kwisikhululo seenqwelomoya.
Kuya kufuneka uphinde ube noxwebhu olusemthethweni lokuhamba xa usiya eZambia, okt, ipaspoti yakho. Kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Iinkcukacha zeVisa yaseZambia
Yintoni i-eVisa yaseZambia?
I-Zambia eVisa yahluke kakhulu kwi-visa yakho yesiqhelo. I-eVisa luxwebhu lokuhamba elinokufunyanwa ngabahambi kwi-Intanethi. Le yinkqubo entsha apho kungasafuneki ukuba abantu beme kwimigca emide okanye balungiselele ixesha lokuya kwiNdlu yoZakuzo. Icandelo loMphathiswa Wezemicimbi Yasekhaya (Isebe Lezokufuduka) likarhulumente waseZambia wazise olu hlobo lutsha lwenkqubo yokwenza isicelo sevisa. Oku kuyenze yalula inkqubo yokwenza isicelo sevisa. Yonke le nkqubo, ukuqala ngokungenisa ifom yesicelo ukufumana iVisa yokuVunywa kwe-eVisa, kuyo yonke enye into yenziwa kwi-Intanethi. Oku kukwavumela abantu ukuba bafake izicelo zolu xwebhu lubaluleke kakhulu kuyo nayiphi na indawo.
Ungasifaka njani isicelo se-eVisa eZambia?
Ukufaka isicelo kwi-eVisa kwi-Intanethi akukho nto imfutshane kwikhekhe. Ngamanyathelo amathathu nje kuphela, unokugqibezela yonke inkqubo, ethi kwimeko ye-visa yesiqhelo, ithathe ixesha elininzi. La manyathelo alandelayo:
Gcwalisa ifom yesicelo: Into yokuqala ekufuneka yenziwe xa kufikwa kwisicelo se-eVisa, ewe, kukugcwalisa le fomu. Ukufumana ifom kulula kakhulu. Inokukhutshelwa kwiwebhusayithi karhulumente. Emva kokukhuphela, zalisa zonke iinkcukacha ngokuchanekileyo. Nje ukuba eli nyathelo lugqityiwe ungadlulela kwinqanaba elilandelayo.
Faka amaXwebhu: Ukuzalisa nje ifom yesicelo akwanelanga. Kuya kufuneka ulayishe amaxwebhu afunekayo. Unokuwafumana la maxwebhu ngokucacileyo, ngokuchanekileyo kwaye uwafake kunye nefom yesicelo.
Hlawula umrhumo weVisa: Inyathelo lokugqibela liquka ukuhlawula umrhumo wevisa, ekwalula kakhulu ukwenza. Kuya kufuneka ube nekhadi lokuthenga ngetyala okanye ikhadi lebhanki ukuze ukwazi ukwenza le nkqubo.
Emva kokuba la manyathelo mathathu egqityiwe, ifom yesicelo iya kuqwalaselwa kwaye ngeentsuku ezimbalwa uyakufumana ileta yokuVunywa kwe-eVisa. Emva kokuba ufikile eZambia, kuya kucelwa ukuba ubonise igosa lezokufika apho kwaye bakukujonga, baya kukunika i-visa yakho yokugqibela.
Umyalelo wabakhenkethi abafaka isicelo seVisa yabakhenkethi baseZambia
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngelixa ubunyani be-eVisa bungeentsuku ezingama-90 kwaye buvumela ungeniso olunye, oluphindwe kabini kunye noluninzi, ngaphandle kukho abemi baseMelika. Bavunyelwe ii-visa ezininzi ngokusemthethweni kwe-3 iminyaka.
Ukufumana ileta yokuVunywa kwe-eVisa akuqinisekisi ukuba uza kufumana i-visa okanye ukungena kwakho eZambia. Abasemagunyeni banelungelo lokungayamkeli i-visa ukuba bafumana ingxaki nayo.
Yintoni iVisa yokhenketho yaseZambia?
Inkqubo entsha yeVisa yaseZambia yenza ukuba kube lula ukufumana i-visa ngokulula. Olu luxwebhu lokuhamba oluza kuyidinga ukungena eZambia.
Buyintoni ubunyani be-eVisa evunyiweyo eZambia?
Emva kokuba i-eVisa eya eZambia inikezelwe, iya kusebenza iintsuku ezingama-90.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka alayishwe kunye nefom yesicelo?
Kuya kufuneka ungenise ifoto yomenzi-sicelo, ikopi efundwayo yephepha lencwadi yokundwendwela, ileta yokugubungela, isiqinisekiso senqwelomoya, ubungqina bendawo yokuhlala, ikopi efundwe kwiphepha lokugqibela lepaspoti (ukuba ikhona), kunye neleta yesimemo (ukuba kuyangena).
Hlobo luni lwamaxwebhu ekufuneka ndiwangenisile kwisikhululo seenqwelomoya emva kokufika?
Emva kokufika kwakho, kufuneka unikezele ngeleta yokuVunywa kwe-eVisa kunye nepasipoti esemthethweni.
Ngaba kuya kubakho ukubuyiselwa kwemali yam ye-visa, ukuba isicelo saliwe?
Hayi, awuyi kufumana nasiphi na isixa semali sokubuyiselwa kwisicelo sakho.
Mangaphi amangenelo avumelekileyo nge-eVisa yaseZambia?
Nge-eVisa yaseZambia esemthethweni, uya kuvunyelwa ungeniso olunye, ukungena kabini kunye namangenelo amaninzi, ngokusekwe kwi-visa eyenzelwe isicelo.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti yam izalisekise?
Ipasipoti yakho mayibe semthethweni iinyanga ezi-6 kwaye kufuneka ibeneliphepha elinye elingenanto.
Ndiyihlawula njani imali ye-eVisa?
Inkqubo ye-eVisa ikwi-intanethi ngokupheleleyo kungoko iindlela zokuhlawula zikwi-Intanethi, ezinje ngekhadi lekhredithi elisebenzayo okanye ikhadi ledebhithi.
Ndingalujonga phi ulwazi malunga nobume bam bevisa?
Nje ukuba ifom yesicelo iye kulungiswa, izaziso ziya kuthunyelwa kwi-imeyile yakho.
Ndiza kuyifumana njani i-eVisa yam?
Ukufika kwakho kwisikhululo seenqwelomoya, kufuneka unikezele ngeleta yokuVunywa kwe-eVisa. Emva kokuyijonga, amagosa okufudukela kwelinye ilizwe aya kukunika i-visa yokugqibela.